"Moments with Friends" is a Q & A feature of The Teny gazety. Teo anelanelan'ny 1906 sy 1916, ireo fanontaniana voatanisa etsy ambany dia naparaky ny mpamaky The Teny ary novalian'Andriamatoa Percival tamin'ny fiantsoana hoe “NAMANA”. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nanapa-kevitra ny hametraka ny anarany ho mpanoratra ny valiny izahay.
Tamin'ny 1986, The Word Foundation dia namorona dikan-teny isan-telo volana amin'ny The Teny gazety mbola avoaka. Izy io koa dia ahitana fizarana "Moments with Friends" ahitana fanontaniana avy amin'ny mpamaky sy valiny avy amin'ny mpianatra maharitra.
Mamakia fotoana miaraka amin'ny namana
• Azonao atao ve ny manazava amin'ny fomba feno kokoa ny fomba fihevitry ny olona samy hafa momba ny tontolon'ny nofo mba hamokarana karazan-biby isan-karazany toy ny liona, bera, vorombola, bibilava? (Ity fanontaniana ity dia miresaka momba ny famoahan-kevitr'i Percival nieritreritra.-Ed.)